Inweta ego -sivusto blogi gị ọ dị mfe ịchụ ego karia ịmalite azụmahịa omenala ma ị gaghị eleba iwu iwu mkpochapụ anya ma ọ bụ tinye maka ikikere ụlọ.
Otu n’ime iwu iwu kachasị mkpa ma dị mkpa bụ iwu nzuzo, nke a na-emetụta weebụsaịtị, nnukwu ma ọ bụ noudattaa. Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmahịa ma ọ bụ ọbụnadị blogger na-enweghị ego-sivusto na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ejighị n’aka ihe kpatara ụwa na mbụ ị ga-achọ otu, ị nwere ike ijuanya.
Siellä ei voi olla mitään – ga – adke (ọ bụrụgodị na ị maghị ya) – ichikota ụdị ozi dị iche iche site ndd ịbịa gị, na – edebe ha nchịkọta, ma ọ bụ na – egosipụta mgbasa ozi. Maka ọtụtụ n’ime, kun otan nd n a, tässä ei dd elu elu dị elu na achịrọ ka ịwewe iwu nzuzo.
1 Kedu on Nzuzo Nzuzo?
1.1 Data = Ego
1.2 Iwu nzuzo naba dba iche iche
2 Tinye Nzuzo Nzuzo Gịn’ime Ebe Taa
Kedu on Nzuzo Nzuzo?
Se on choro bu dabere nawu ma obu iwu ndi ozo. Ọzọkwa, nkọwa nke ihe bụ "ozi nkeonwe" dịgasị, mana ọ na-agụnye aha na adreesị email, na mgbe ụfọdụ, adreesị IP na kuki nchọgharị.
Data = Ego
Na oge ọmụma, data bụ ego ọhụrụ. Ozi nzuzo nke ndị mmadụ n’otu n’otu bara ezigbo uru nye ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ, na gọọmentị.
Taa, ụtụtụ mba na-eleba anya na nzuzo dị ka ikike dị mkpa nke ụmụ mmadụ, ha agafewokwa iwu iji chebe ndị mmadụ site n’ihe ọmụma ha na-anakọta ma jiri na-enweghị ihe ọmụma ha. Iwu nzuzo nzuzo na-achọkarị na onye ọ bụla na-anakọta ozi nkeonwe site na ebe nrụọrụ weebụ ha ga-enwe nkwupụta na otu na ihe kpatara ha ji eme ya.
Dịka ọtụtụ iwu nzuzo, we ei ollut ike ikpebi ma ọ bike ọbụna na-eme mkpesa ma ọ bụrụ na ịnakọta ozi nkeonwe na-agwaghị ndị ọrụ gị, ma ọ bụ ma z borụ na.
Iwu nzuzo naba dba iche iche
Iwu Nzuzo Australia (APP) bụ nchịkọta nke ụkpụrụ 13 na-eduzi njikwa ozi nkeonwe. Dịka ụkpụrụ ndị a si dị, ị ghaghị ijikwa ozi nkeonwe na ụzọ a na-emeghe na nke a na-emeghe.
Ntuziaka nchekwa data nke Euroopan unionin tiedot 1998 ekwu na onye ọ bụla nhazi data nke onwe ya aghaghị ime ya n’ụzọ ziri ezi ma kwadoro. Iji mee ka nchịkọta tiedot oltiin ya dị ka iwu kwadoro, ga-anakọta data nanị maka akọwapụtara nke ọma, nke doro anya na nke ziri ezi.
Iubena enyere ndị ọrụ alias ịmepụta iwu nzuzo na nzọụkwụ atọ:
Tinye ọrụ (esim. Google Adsense) ị na-eji na ụdị data ị na-anakọta,
Tinye iwu na saịtị.
* P ona onyinyo iji gbasaa.
Akụkụ kasị mma nke iubenda – iwu nzuzo gị ka akwadoro na sava ha. Nke a pụtara na usoro ahụ nwere ike ị mepụta ederede iwu mgbe ọ bụla iwu gbanwere.
Karịa ụrụ 600, uusi Facebook Like, Google Adsense, Google Analytics, painike LinkedIn, Twitter, Alexa Metrics, Amazon Associates; edozi ya na usoro ozo.
Azịza nkwụsị – ee. Tietysti ei oteta huomioon, että se olisi GDPR.
Na ego nke $ 39 / kk (ouch!), Usoro ahụ ga-enyere aka:
Shopify na-enye ngwá ọrụ dị mfe ebe we uudelleen ike ị mepịta nkwụghachi ụgwọ na usoro nke iwu ọrụ maka n’efu.
Zọkwa – gụọ nyochaa Shopify anyị.
We ei ollut ike ịpị "Hụ na ị ga-achọ ikpe ikpe" igbe ma mepụta iwu nzuzo gịn’efu.
Tinye Nzuzo Nzuzo Gịn’ime Ebe Taa
Ụ bụ ezie ọ ọ we ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ọ ọ blog blog blog blog blog ọ ọ ọ ọ Reallychọghị ihe ọ bụla ịchọrọ ka amachibido ya na netwọkụ Mgbakwunye gị ma ọ bụ ịbụ onye onye ọbịa websaịtị na-agba akwụkwọ.
Chebe on verkkosivustolla na iji otu n’wa ngwaọrụ ndị dị n’elu iji mepụta iwu nzuzo gị ugbu a, ị gaghị echegbu onwe gị! Usoro ahụ ga-enyekwara gị alias ịmata onwe gị na nkọwa bara uru na nzuzo onye ọrụ.
Njikọ ọsọ Internetska stranica eweta na blogu gị ọ dị mfe ịchụ ego karia